Diego Maradona oo ugu baaqay Lionel Messi in uusan ku soo laaban Xulka Argentina Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Diego Maradona oo ugu baaqay Lionel Messi in uusan ku soo laaban Xulka Argentina Sabab?
(02-10-2018) Halyeygii hore ee xulka qaranka Argentina, Diego Maradona ayaa tibaaxay inuu u sheegi doono Lionel Messi in aanu dib ugu soo laabanin xulka qaranka dalkaas oo uu si ku-meelgaadh ah nasasho uga qaatay waqti aan la cayimin.
Messi oo ay da’diisu tahay 31 jir ayaa kulankiisii ugu dambeeyey ee uu u saftay waxa uu ahaa ciyaartii ugu dambaysay ee Koobkii Adduunka 2018 ay kaga hadheen, waxaana uu seegay oo aan liiskaba lagu soo darin laba ciyaarood oo bishii September uu dalkiisu ciyaaray, sidoo kalena waxa uu ka maqnaan doonaa laba ciyaarood oo saaxiibtinimo oo Ciraaq iyo Brazil uu dalkiisu la ciyaari doono.
Maradona oo Argentina u qaaday Koobkii Adduunka ee 1986-kii, waxa uu dareensan yahay in Messi oo ah ciyaartoyga ugu goolasha badan taariikhda xulka dalkaas, inay tahay inuu si rasmi ah uga fadhiisto ciyaaraha caalamiga, isla markaana uu rasmi u beddelo go’aankiisa ku-meel-gaadhka ah ee uu nasashada kaga galay.
Maradona oo u warramay warbaahinta Clarin, ayaa waxa uu yidhi: “Mar dambe ha imanin, sababtoo ah, haddii laga badiyo xulka carruurta ee 15-jirrada, waxa khaladka leh Messi. Ciyaaraha Argentina waxa loollan kaga hor imanaysa Boca, waxa la eedaynayaa Messi. Mar kasta isaga ayaa khaldan.”
Maradona oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa ku daray: “Waxa aan odhan lahaa, wax intaa ka badan ha imanin. Aaynu aragno siday isku wadaan.”
Messi oo hoggaaminaya xulka dalka Argentina ayaa waxay bahdilaad kala kulmeen Koobkii Adduunka ee Russia 2018, waxaana si xun u karbaashay Croatia ka hor intii aanu xulka France ku reebin wareegga 16-ka.